Bixinta ugu horreysa ee Meizu 16S waxay ku daadataa internetka | Androidsis
Bixiyaha ugu horreeya ee Meizu 16S wuxuu ku siidaayaa khadka tooska ah: kamarad gadaal saddex-laab ah oo aan lahayn qaan-gaar ama xarago waa waxa soo socda
Haaruun Rivas | | Meizu, Noticias
Bishii Ogosto ee la soo dhaafay, Meizu wuxuu bilaabay taxanahiisa 16, kaas oo laga helay noocii asalka ahaa iyo noocii Plus, ka dibna Meizu 16X, oo ah meel dhexaad u ah qeexitaannada la jarjaray. Taleefoonnadu waxay ku heleen ammaan naqshadooda, dhisid tayo leh, qeexitaanno, iyo qiime. Hadda, warka dhaxal sugaha ayaa bilaabay inuu ka soo muuqdo shabakada.
Waxay ahayd agaasimaha guud ee Meizu laftiisa kan taas xaqiijiyay bedelka kuwan waxaa loogu yeeri doonaa 'Meizu 16S'. Taas ka dib, taageere ayaa sameeyay miis Meizu 16S, inkasta oo laga yaabo inaysan ahayn tan dhabta ah, waxay u egtahay mid wanaagsan waana kan ugu horreeya ee la heli karo.
Sawirka, Meizu 16S waxaa lagu muujiyey caddaan, sidii kii kahoreeyay. Si kastaba ha noqotee, waxay ka takhalustaa geesaha gebi ahaanba, laakiin ma laha qashin. Shaashadda hoosteeda, waxaa ku yaal iskaanka sawirka faraha, maadaama midna aan lagu faah faahin dhabarka ama dhinacyada. Aawayna kamarada hore? Tani waa wax la sugi doono.
Qalabka bixinta ee halkaan sudhan, wuxuu leeyahay saddex kamaradood oo gadaal ah. Kuwaas waxaa la dhigaa bartamaha taleefanka oo si toos ah. Hoos waxaa ku yaal dareemayaasha sawir qaadista, waxaa jira giraan toosh ah. Sawirka sidoo kale wuxuu muujinayaa in taleefanka uu ku leeyahay dekedda nooca-C-ga ee dhinaca hoose oo ay dhinac yaalliin grille a speaker iyo aaladda codka ee 3.5mm.
Malaha, waxaa wadi doona Snapdragon 8150 waxayna yeelan doontaa ilaa 8 GB oo RAM ah. Waxaan sidoo kale u maleyneynaa inay tahay waqtigii Meizu inuu ku daro taageerada lacag-la'aanta wireless, muuqaal ku imaan kara taleefankan, iyo inay tahay. (Ogow: Meizu wuxuu doonayaa inuu noqdo shirkadii ugu horeysay ee taleefoon ka furata Snapdragon 8150).
Inteeda kale, la iman lahaa nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee Android, kaas oo ah Cagta 9.0, iyo sidoo kale shaashad aan ka yarayn 6 inji oo jaantus ah oo leh FullHD + qaraar. Intaa waxaa dheer, waxay ku imaan laheyd dhowr ikhtiyaar oo ah kaydinta gudaha ah iyo waxyaabo kale oo qeexan oo waxqabad sare leh oo dhowaan la ogaan doono. Waxay sidoo kale la imaan laheyd nooc ka sii horumarsan: Meizu 16S Plus.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Bixiyaha ugu horreeya ee Meizu 16S wuxuu ku siidaayaa khadka tooska ah: kamarad gadaal saddex-laab ah oo aan lahayn qaan-gaar ama xarago waa waxa soo socda
Fortnite ayaa soo shaac baxday oo ku faaneysa qaab ciyaar cusub, waana 'Wild West'
Moto Z4, faahfaahinta koowaad ayaa la muujiyay